गुन्डा नाइके गणेश लामा माथि इन्काउन्टरको प्रयास ? – गोर्खा संसार
गुन्डा नाइके गणेश लामा माथि इन्काउन्टरको प्रयास ?
गोर्खा संसार २०७४, २० चैत्र मंगलवार १०:२३
काठमाडौं ,२० चैत ।
गुन्डा नाइके गणेश लामालाई पिंगलास्थानमा भएको ‘फाइट’मा इन्काउन्टर गर्न खोजिएको तथ्य फेला परेको छ । तर लामाले इन्काउन्टर गर्न प्रयास गर्नेलाई पेस्तोल ताकेर धम्काएको एक भिडियोमा सार्वजानिक भएपछि यो तथ्य पत्ता लागेको हो ।
गत फागुन ३० गते बेलुका पिंगलास्थानस्थित पशुपती भिजन होटलबाट निस्किएलगत्तै एक व्यक्तिले लामालाई गोली हान्ने प्रयास गरेका थिए। पछि लामाले पेस्तोल देखाएर ती व्यक्तिलाई धम्क्याउँछन्।
भिडियोमा लामा होटलबाट निस्कनुअघि एक गाडी त्यहाँबाट अघि बढ्छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यो गाडीमा गणेश लामाका भाई राकेश र उनका साथी मनोज आचार्य थिए।
रातो टिसर्ट लगाएका लामा झोला बोकेर गाडीतर्फ जाँदै गर्दा झगडा भएको थियो। भिडियोमा देखिएअनुसार पेस्तोल उनकै जीउबाट भुईमा खस्छ। त्यही पेस्तोल हातमा लिएर प्रतिद्वन्द्वीलाई उनले तर्साउँछन्। त्यो पेस्तोल लामाको भएको प्रहरीको दाबी छ। सोही आरोपमा उनलाई थुनामा राखी प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा कारबाही अघि बढाएको छ।
लामाले बयानमा बताएअनुसार मास्क र हुक लगाएका एक व्यक्तिले उनलाई पेस्तोल ताकेका थिए। एक राउन्ड फायरसमेत भएको थियो। तर, समयमै आफूले प्रतिवाद गर्दा गोली भुइँमा लागेको उनले बताएका छन्। आफूमाथि आक्रमण भएको पेस्तोल नै त्यहाँ भेटिएको र प्रहरीले बरामद गरेको उनको दाबी छ। तर, भिडियोमा भने उनले नै पेस्तोल लिएर धम्क्याएको देखिन्छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल भने आफूहरुको अनुसन्धानमा सो हतियार लामाकै भएको खुलेको दाबी गर्छन्। ‘लामाकै हातबाट प्रहरीले जबर्जस्ती पेस्तोल खोसेको थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यहाँ भेटिएको गोलीको खोका त्यही पेस्तोलबाट चलेको पुष्टि भइसकेको छ।’
४० फिट अग्लो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पालुङटारको लिगलिग कोटमा
२०७५, २६ पुष बिहीबार १५:१२
सरकारी कार्यालय हस्तान्तरणमा अन्योल
२०७५, ३ बैशाख सोमबार ०६:४५
तनहुँको बन्दिपुर ५ मा नेपाल तरुण दल वडा कमिटि गठन
२०७७, ६ चैत्र शुक्रबार २०:५७
मिथिलाञ्चमा मङ्गलबारदेखि छठ पर्व विधिवत् रूपमा सुरु
२०७७, २ मंसिर मंगलवार २०:५५
२०७६, २० भाद्र शुक्रबार १५:५५
सुनचादीँको सिण्डीकेटअन्त्य गर्न माग
२०७५, ५ भाद्र मंगलवार १६:३१
पालुङटार ८ मा याेग शिविर सम्पन्न